Olee otú Tinye Voiceover na iMovie on Mac / iPhone / iPad
i 5.8 iMove Tutorial
Dị ka George Lucas a na-ewu ewu filmmaker, "Sound bụ ọkara ahụmahụ" mgbe anyị na-ekiri fim. Sound ike welie ikuku site nkọ ụda mmetụta ma ọ bụ ike ịgbanwe mmetụta uche site music. Ijikwa gị onwe gị nkiri oru ngo na iPhone ma ọ bụ iPad bụ oké ahụmahụ ma ọ nwere ike ghara ịbụ kwesịrị ma ọ bụrụ na ụda bụghị ruo gị anya. iMovie na nke a nwere ike inyere gị na ijikwa video oru ngo na iPhone ma ọ bụ iPad. Ke ibuotikọ emi, anyị na-aga na-atụle na-esi tinye voiceovers na-ada mmetụta iji iMovie. Ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ guideline na-eme voiceovers on iMovie.
Part1: Tinye voiceover na iMovie on iPhone / iPad
Part2: iMovie Voiceover on Mac
Part3: Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na Voiceover na-adịghị arụ ọrụ?
1. Mepee iMovie na ngwa na mgbata oru ngo. Ị nwere ike ma ike ọhụrụ oru ngo site na ịme ọpịpị na gbakwunyere ịrịba ama ma ọ bụ nanị abụọ enweta na ẹdude oru ngo ẹkedori. The gbakwunyere ịrịba ama bụ na-emekarị n'elu aka nri akuku nke ngwa dị ka e gosiri na screenshot.
2. Kpatụ video na n'elu aka nri akuku na abụọ mgbata na chọrọ clip ịgbakwunye ya na gị na usoro iheomume. Etinye ya na usoro iheomume site na ịpị na clip na n'itinye ya ndị chọrọ ọnọdụ.
3. Dọrọ ekpe ma ọ bụ aka nri n'elu video clip mere na-acha ọcha akara bụ positioned n'ebe ọ bụla ị chọrọ voiceover na-amalite.
4. Mgbe-emecha n'elu nzọụkwụ, enweta na okwu bọtịnụ na ala ziri ezi. A popup ga-apụta maka ndekọ. Metụ ndekọ bọtịnụ na mgbe oge na-amalite, na-amalite na-ekwu okwu. Red igbe ga-apụta mgbe ị na-ndekọ.
5. Mgbe ị na-eme na ndekọ, enweta na Kwụsị bọtịnụ. Enweta na nyochaa na-egwu azụ gị ndekọ. Ọ bụrụ na ị na-agaghị afọ ju, ị nwere ike re-ndekọ site na ịme ọpịpị ileghari. Ọ bụrụ na ị afọ ojuju na ya, enweta Nabata iji ịgbakwunye ọdịyo ndekọ na oru ngo.
6. I nwekwara ike ịgbakwunye ụda mmetụta site na ịme ọpịpị ọdịyo nhọrọ ke top n'aka nri akuku nke ngwa. Ị ga-abịa na a mmapụta si menu na n'ebe họrọ nhọrọ "Sound mmetụta".
7. Mgbe-emecha n'elu nzọụkwụ, ị ga-ahụ ndepụta nke ụda mmetụta site na nke ị nwere ike họrọ na enweta. Play akara ngosi na-ịhụchalụ ụda mmetụta. Ozugbo ị nwere afọ ojuju na ụda mmetụta, pịa na akụ akara ngosi.
8. The họrọ ụda mmetụta ga-atụkwasịkwara n'ebe ọ bụla na i tinyela na-acha ọcha vetikal akara. Iji ịkpali ụda mmetụta, otu mgbata on ụda utịp ke usoro iheomume na ịdọrọ ya ka chọrọ ọnọdụ.
Ị nwere ike ọ bụghị naanị tinye video ma dezie ha dị ka gị onwe gị na ụzọ kamakwa idekọ voiceover iji Mac. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke otú idekọ voiceover on Mac, ebe a bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ guideline na-akụziri unu.
1. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, jikọọ okwu gị Mac.
2. Pịa na Voiceover bọtịnụ na toolbar na ga-eweta voiceover window popup.
3. Ọ bụrụ na ị mere ma, họrọ ọsọ ọsọ isi iyi si popup menu ka ị pụrụ ịhụ na ọnụ ọgụgụ.
4. Gbanwee ndenye olu mmịfe ka ịhazie okwu si uche. Ọ bụrụ na ndị audio larịị bụ ala dị ka ị na-ekwu, dịkwuo pasent. Ọ bụrụ na, ọ bụ kwa elu-akpali ya azụ.
5. Mee mkpọtụ Mbelata mmịfe ka ịhazie mkpọtụ larịị. Ọ bụrụ na ihe mmịfe na-agbazi ka nri, na-erughị mkpọtụ ga-e dere. Uncheck olu nkwalite bụrụ na ị chọrọ ụda na-dere unprocessed.
6. Pịa n'ókè na filmstrip ebe ị chọrọ na ndekọ na-amalite. iMovie mkpa ala 3 sekọnd tupu n'ókè na-amalite ndekọ.
7. Gwa na okwu. The filmstrip amama uhie na-egosi ebe ndekọ emewo.
8. Iji ịkwụsị ndekọ, pịa n'ime oru ngo nchọgharị ma ọ bụ nanị pịa Esc na gị keyboard. A ọhụrụ audio clip ga-mmasị ka filmstrip, nke nwere ike edited dị nnọọ ka ndị ọzọ dị ka e gosiri na ọnụ ọgụgụ.
9. Ka ịdekọọ ọzọ voiceover, pịa ọzọ clip ma ọ bụ nanị pịa voiceover toolbar button ọzọ iji gbanyụọ ngwá ọrụ.
Ọ bụrụ na ndị voiceover na-adịghị arụ ọrụ na Mac, e nwere ole na ole ga-ekwe omume ihe na mfe ụzọ idozi ya. Ebe a bụ mkpirikpi ndu na-esi dozie voiceover nsogbu na gị Mac.
TinyTake ihuenyo Capture
1. Mepee voiceover windows site na ịpị voiceover bọtịnụ na edezi toolbar.
2. Site popup menu pịa ndekọ na họrọ ọsọ ọsọ ngwaọrụ. Ọtụtụ n'ime Mac abịa na wuru na-okwu ma i nwere ike tinye na gị onwe gị dị ka mma.
3. Dọrọ olu button dị ka gị chọrọ. Ị nwere ike nyochaa olu larịị nke olu gị na ekpe na nri ọsọ ọsọ mita. Ọ ga-dịkarịa ala 50% maka kwesịrị ekwesị olu larịị.
4. Dọrọ mkpọtụ Mbelata mmịfe aka nri.
5. Họrọ si ebe na-amalite akomako. Pịa na kpọmkwem akụkụ n'ime a clip ebe ị chọrọ na-amalite gị akomako.
6. Malite na-ekwu okwu mgbe kpaliri site iMovie. Jide n'aka na-ekiri ndị video dị ka ị ndekọ nke mere na ọ ga-adanyerịrị edinam.
7. pịa ebe ọ bụla na iMovie window Ka ịkwụsị ndekọ.
8. Pịa Nso bọtịnụ na Voiceover window.
Olee otú kewaa a clip on Mac / iPhone / iPad
Olee otú ịzọpụta iMovie ngo ke Mac
Olee otú bugharia a video na iMovie
Top 10 iyi njikọ ibudata iMovie
> Resource> iMovie> Olee otú iji Tinye Voiceover na iMovie on Mac / iPhone / iPad